9:50:00 AM Cashiro-Computer, Computerka, Download-freeSoftware, Tichnlogy-yada No comments
Asc aqiyaarey kuso dhawaada Hooyga Barashada Computerka Maanta Haduu Eebe Subxanuhu Watacaala Idmo Waxaan idiin la wadaagi doona Cashir Ku saabsan Sida Mobilekada Sumusng Lo Format Gareyo.
Aqriste Intaadan Rest u dirin Mobile-kaada Fadlan ka Taxadar oo Xogtaada Xafido Maadama aad rabto in aad Mobile Dhaqdo ama Format-gareyso.
Hadaba Muxuu Rest Yahay aan isla fahano:
Rest waxaa laga wada in Mobile-kaada aad Format-gareyso Yacnii aad Tirtirto Dhamaan Xogtii ku jirtay Mobile-kaada wuxuu ka dhigaa sida uu aha Markuu Cusba Waxaana bad baadayo oo kaliya Mobile-ka wixii lagu keenay markuu cusba.
Hadaba Markaad ila fahantay Rest waxa uu yahay Waxaan guda Galeyna Qaabka Rest lo Sameyo ama Lo Format Gareyo Mobile-ka .
Maxa keena in Mobile-ka aad Format gareysid ama Rest aad u dirto:
Waxa keeni kara in aad Format gareyso Mobile-ka Maxa yeelay waxaad ku arki karta Culees.
Sidoo kale waxa ku arki karta Verus iyo in wax yaabaha qaar uu ka diido marka ciladaas ayuu ka xalina iyo wax yaabo kale oo inta lagu so koobi Karin.
Mobile-ka Sumsung waxa Rest ugu sameyn karta Dhoor Qaab oo kala duwan Lkn manta Waxaan idin Tusi doona 3 Qaab oo aad mari karto Midkii aad jaceshahay.
Qaabka 1-aad Waa adoo adeegsanayo Settings (Method 1: Hard reset using "Settings" app):
Step 1: Ku dhufo Ama Dooro Settings(1.Go to Settings. )
Step 2: Dooro Backup and Rest Settings(2.Select Privacy (Backup & Reset). )
Step 3: Dooro Meesha ay ku qoran tahay Factory Data Reset (3.Choose Factory Data Reset. )
Step 4: Dooro Meesha ay ku qoran tahay Reset Phone or Reset tablet. (4.Choose Reset Phone (or Reset tablet). )
Step 5: Dooro Erase everything Fadlan intaadan ku dhufan iska Hubi maxa yeelay wuxuu tira wax walba oo Mobile-ka ku jiro wuxuuna ka dhiga sida uu aha markii La so gadayay. (5.Select Erase everything. )
Step 6: Wax yar Sug inta uu Ka dhameynayo Mobile-ka Rest-ka (6.Wait until reset finished)
Qaabkaas aya lo Format gareya Mobile-ka Markuu dhameyo Saxo Luqada Sidoo kale Gali Gmail-kada kadib Finish.
Halkaan waxa ku eg Qaabka 1-aad ee aha Adoo Setting adeegsanayo
Qaabka 2-aad Waa adoo adeegsanayo Code Ama Numberk ay shirkada ugu Talagashay in lagu Format gareyo (Method 2: Hard reset using code):
Step 1: Dooro Ama ku dhufo Qeybta Call ee la yiraah Phone(1.Go to Phone. )
Fadlan inta aadan numberkan hoose Gelin iska hubi Maxa yeelay wuxuu Bilaaba Rest-ka marka Xogtada Maku xafidan tahay iska hubi.
Step 2: Geli ama qor *2767*3855# (2.Enter *2767*3855#. )
Step 3: Sug ilaa uu ka dhameynayo Rest-ka (3.Wait for reset to complete. )
Halkaan waxa ku eg Qaabka 2-aad ee aha Adoo Gelinayo Code ama Number ay Shirkada ugu Talagashay adeegsanayo.
Qaabka 3aad Waa adoo adeegsanayo Android System Recovery or ClockworkMod Recovery(Method 3: Hard reset using Android System Recovery or ClockworkMod Recovery):
Markii Qaabkan la sameynayo Mobile-ka waa la damiya Qaabkan wuxuu ka caawina Mararka qaar Mobile-ka Adeeg ayuu noqona Ama Markuu Verus isla dadaminayo aya la adeegsada.
Step 1: Marka Hore Mobile-ka Dami (1.Power off your device. )
Step 2: Hal mar isla qabo Meesha Mobil-ka laga damiyo marna laga daaro iyo Mesha Codka laga Gaabiyo ee Hoose iyo Meesha dhexe Eeg Sawirka hoose (Hold Power+Vol down+Home. (On Screen button devices is Power+Vol down). )
Aqristoow Ogoow Mobile-da Sumsung wey kala duwan yihiin Qaar aya ah Power+Vol down+Home qaarna Waa Power+Vol Up+Home
Yacnii Farqiga ma fahantay Farqiga waxa waaye Mobile-da qaar waxa la adeegsana ama la isla qabana hal mar Meesha Mobil-ka laga damiyo marna laga daaro iyo Mesha Codka laga Gaabiyo ee Hoose iyo Meesha dhexe sida kan Sawirka hoose oo kale.
Halka qaarna la isla qabanayo hal mar Meesha Mobil-ka laga damiyo marna laga daaro iyo Mesha Codka laga Gaabiyo ee Hoose iyo Meesha dhexe
Step 3: Dooro Meesha ay ku qoron tahay Wipe Data/Factory Reset. (3.Choose Wipe Data/Factory Reset. )
Ogoow markaad rabto inaad kor aado adeegso Meesha laga dheereyo codka Mobile-ka ee Kore.
Markaad rabto inaad Hoos aado adeegso Meesha laga Gaabiyo codka Mobile-ka ee Hoose.
Markaad rabto inaad Ok dhahdo ama ku dhufto rabtit Adeegso Meesha Mobile-ka laga damiyo .
Step 4: Dooro Meesha ay ku qoron tahay Yes, Delete All User Data . (4.Choose Yes, Delete All User Data. )
Fadlan inta aadan Ok dhehin iska hubi Maxa yeelay wuxuu Bilaaba Rest-ka marka Xogtada Maku xafidan tahay iska hubi.
Step 5: Sug xoga ilaa uu ka dhameynayo Rest-ka wax yar. (4.Wait for date wipe to accomplish. )
Ogoow Xuquuqda Sawirada Waxa leh Websit-ka La yiraah
Xuquuqda Qoraalka waxa leh www.ifiyahacilmiga.blogspot.com Waad isticmaali karta waxana u adeegsan karta Hab waxbarasho.
Qore: Eng C/risaaq Mrashiid Axmed .
Sidee lo Save gareysta Qoraalada,Sawirada ku jira Internetka Adigoo isticmaalaya Opera Menu si aad u daalacato Markaad Offline-ka tahay Ama Qadka aadan ku jirin +Qoraal+Sawir
9:53:00 AM Cashiro-Computer, Ciladbixin-computer, Computerka, Qormooyin, Tichnlogy-yada No comments
Asc aqiyaarey meel walba oo aad joogtan kuso dhawaada Hooyga Barashada Computerka Maanta haduu Eebe Subxaanuhu Watacala Idmo Waxaan idiin la wadaagi doona Cashir Yar Islamarkaana Faa'ido leh.
Dabcan Hadii aad Taqaan Waa sidii la rabay balse waxaan Cashirkan ugu Talagalay in ay ka Faa'iidestan Walalaha Soomaliyeed ee Aaan Garaneen.
Cinwaanka Cashirka waa:
Sidee lo Save gareysta Qoraalada,Sawirada ku jira Internetka Adigoo isticmaalaya Opera Menu si aad u daalacato Markaad Offline-ka tahay Ama Qadka aadan ku jirin.
Wali Makugu dhacday Aqristoow Dhacdadaan:
Waxa laga yaaba Mararka Qaar in aadan Isticmaaleyn Alaada Internet-ka islamarkaan aadan heli Karin Ama Waxa laga yaba in aad Safar tahay Ha ahaado midkuu Doono Baabur,Tareen ama Diyaarad marka waxa laga yaaba in aad u baahato waxyaabo aad isku mashquuliso sida Aqrinta sheekoyin Taarikho iyo Qoraalo kale si aad intaa u hesho Buug iyo Internetkii aad ka heli lahed macluumadka ma heesatit Maxaa Xal ah.
Ciladaa waxa kuu xalin kara Browser-ka la yiraah Opera Menu.
Hadaba Maxa la dhaha Browser:
Browser :waxa la dhaha Waa Application ku saamaxayo ama ku ogolaanayo in aad ku Daalacato Websit-yada .
Browser-ada ugu Caansan ya kamid ah:
Iyo kuwa kale oo inta lagu so koobi Karin
Marka sida Daraadeeda Opera Menu waxa uu kamid yahay Browsara-da Ugu Caansan.
Hadaba Cashirka aan Guda galo :
Opera Menu waxa uu ku saamaxa in aad Ku Save Gareysato ama ku xafidato Qoraalada Aad marka Internet-ka Heesato Aqrinsanesid si aad Markaad Interneedka ka baxdo aad u aqrisato.
Sidee lo So Dajiya Ama Loogu Shubta Mobile-ka Opera Menu Raac Tilaabooyinka:
Step 1: Dooro ama Fur Playstore oo ah Meesha Applicationada laga so dagsado:
Step 2: Markuu Playstore ku Furmo Meesha Searching-ka ku qor Magaca Applicationka adoo qoraayo Opera Menu markuu kuso baxana Ku dhufo ama Taabo Applicationka Opera Menu:
Step 3: Markuu kuso baxo Opera menu kadib ku dhufo Install :
Step 4: Markuu ku shubmo kadib Open dheh Si aad Cashirkeena u guda galno :
Markaad ku Shubatay Opera menu Mobile-ka kadib Sidee lo Save Gareya Marka Qoraalada aad rabto:
Raac Talaabooyinkan Hoose:
Tilaabada 1-aad: Fur Applicatinka Opera Menu --Markaad Furto waxa Arke Sawirkan hoose oo kale:
Marka Furto Appllication-ka Opera Menu so Diyaarso Warbixinta ama Sheekada ama Qoraalka aad rabto in aad Save gareysato Markaad Diyaarsato Raac Tilaabta 2aad .
Ogow Adoo so diyaarsan Qoraalkii aad Save gareyn lahed Ma Sameyn kartit Tilaabada 2aad:
Tilaabada 2-aad: Ku Dhufo ama Taabo Caalamada Sadaxda- dhibic ee is kor saran ee ku taalo Qeybta kore Dhinaca Midig ee Application-ka Raac Tilmaanta Sawirka hoose :
Tilaabada 3-aad: Markaad ku dhufato ama Taabato Caalamada Sadaxda- dhibic ee is kor saran ee ku taalo Qeybta kore Dhinaca Midig waxa kuso baxaayo Sawirkaan Hoose Kadib ka Dooro Meesha ay ku qoran tahay Save For Offline kadib ok dheh:
Tilaabada 4-aad: Qoraalkii aad Rabtay Sidaas aya ku Save gareysatay markaad Rabto ayaad Aqrisan karta adoo heesan xita Wax Internet ah.
Hadaba Sidee loso Bixiya Wixii aad Save Gareysatay ama Diinwaan Galisay :
Raac Tilmaamahan Hoose:
Step 1: ku dhufo Qeybta hoose Dhinaca Midig Calaamada Koobaabinta Ama Calamada Opera ee hoos ku taal Raac Tilmaanta Sawirka hoose:
Step 2: Markaad ku dhufato Calaamada Opera ee Hoos Taal Qeybta Midig Waxa kuso baxayo Sawirkan hoose kadib waxaad ka sii Doorata Meesha ay ku qoran tahay Offiline Pages ku Dhufo:
Step 3: Markaad ku dhufato Offiline Pages Kadib waxa kuso baxayo Inta Qoraal ee aad Save Garystay Midkaad Rabto aya Furi karta :
Ogoow Aqristoow Xuquuqda Sawirada Waxa leh Websit-yada Kala ah:
Xuquuqda Qoraalkana Waxa leh Anigo ah C/risaaq MRashid Ahmed
Fasax ayaadna u tahay Aqristoow in aad u adeegsato Hab waxbarasho Dhamaan qoraalada ku jira IfiyahaCilmiga
Waxa idiin Diyaariyay : Eng C/risaaq MRashiid Axmed
Wixii Suaal iigu so dir Alaqsaa1996@gmail.com
Halkaan ka Daawo Dhamaan Cashirada Html And Css Waxa idiin so Diyaariyay C/risaaq MRashiid Axmed(Fadlan Asxaabtada la wadaag si ay iyagana uga Faa'iidan)
8:42:00 AM Cashiro-Computer, Ciladbixin-computer, Html, Tichnlogy-yada No comments
Asc aqiyaarey meel walba oo aad joogtan waxaan idin leeyahay Maalin wanaagsan manta waxan idiin so gudbinaya Dhamaan Cashirada Html and Css ee Diyaarka ah .
Waxaan huba hadii aad Si wanaagsan oo isku xig xiga aad u Daawato in aad Wax badan ka Faa'iidi doontit waxaadna abood u yeelan doonta inaad Project Kooban aad ku Dhisto.
Hadii aad Fahanto Html and Css Waxaa ku Fududaan Doono Barashada PHP ,ASP.net,JSP IWM.
Max yeelay Luqaha Waxa lagu Qurxiya Html and Css.
Dhanka kale Cashiradaan waxa ay leeyhiiin Quality Maxaa yeelay Horay aya looga so Cawday sidaas awgeed ayan kuwii hore Ka saaray Youtube Waxaana so galiyay Kuwaan Tayada Leh.
Cashiradaan Waxaan ka diyaariyay Websit-ka Caanka ah ee la yiraah https://www.w3schools.com/
oo ah mid kamid ah Websiit-yada ugu caansan ee laga barta Culuumta Computer-ka.
Hadaba Si aad u Daawato Linikigan hoose ku dhufo.
Halkan ku Dhufo si aad U Daawato Dhamaan Cashirada Html And Css
Wixii Suaal waxaad iigu so Diri karta : Alaqsaa1996@gmail.com
Fadlan Asxaabtada la wadaag si ay igana uga faaiidan.
Daawo Dhamaan Cashirada Ms Sql Server Waxa idiin so Diyaariyay C/risaaq MRashiid Axmed Ka Faa'iidesi Wacan(Fadlan asxaabtada La wadaag si ay ayagana uga Faa'iidestan)
8:19:00 AM Cashiro-Computer, Ciladbixin-computer, Tichnlogy-yada No comments
Asc aqiyaarey meel walba oo aad joogtan waxaan idin leeyahay Maalin wanaagsan manta waxan idiin so gudbinaya Dhamaan Cashirada MS Sql Server ee Diyaarka ah anagoo kaso biloownay Meel hoose islamarkaana aan Geynay Meel Sare (Advanced ah).
Dhanka kale Markii aad Cashiradaan Daawato Waxa qeybta Danbe ah Quize kooban kaasi oo ka tarjumaayo in aad fahantay Cashirada iyo in kale .
Hadaba Si aad u Daawato Linikiyadan hoose eeg.
Halkan ku Dhufo si aad U Daawato Dhamaan Cashirada MS Sql Server
Sheko murti ah:Boqor aya maqlay nin Shaqaalihiisa kamid ah oo haweynediisi ku leh "ana ka dadaal badan ninka Wasiirka u ah Boqorka oo ka shaqo badan oo ka orad badan Hadana Boqorka waxa uu isiiya 2 rubi Wasiirkana wuxuu siiya 2000 oo rubi"+Hadaba Maxa ninka lagu qanciyay
1:46:00 AM Dhaqanka, NOLOSHA, Taarikhaha No comments
Asc aqiyaarey kuso dhawaada Hooyga Waxbarashada Maanta waxaan halkaan idiin kula wadaagaya Sheeko aad u xiisa badan oo isoo jiidatay Dabcan aan filaayo in adinkana aad ka heli doontan .
Runtii Shekadaan waa mid Murti leh oo I taabatay ani ahaanteda maxa yeelay Cashir aan caadi ahen ayan ka bartay.
Cinwanka Shekada waxa aan ka dhigay :
Sheko murti ah:Boqor aya maqlay nin Shaqaalihiisa kamid ah oo haweynediisi ku leh "ana ka dadaal badan ninka Wasiirka u ah Boqorka oo ka shaqo badan oo ka orad badan Hadana Boqorka waxa uu isiiya 2 rubi Wasiirkana wuxuu siiya 2000 oo rubi " +Hadaba Maxa ninka lagu qanciyay
NB: Xuquuqda Video waxa leh Nin lagu Magacaabo C/wahaab Maxmed Cismaan.
Channelka Youtubeka aan ka helay Video waxa la dhaha YOOL TV.
Video waxan u adeegsanena Waxbarasho oo kaliya Xuquuqdana waxa leh C/wahaab Maxmed Cismaan.
IfiyahaCilmiga Tichnology Center
Halkaan ka daawo : Taariikh noleeydka Nick Vujicic oo ah Nin lixaadkiisa uusan Dhamestirneen Islamarkana Nolosha Meel Sare ka gaaray.
1:14:00 AM Taarikhaha No comments
Asc Aqiyaarey Kuso dhawaada Hooyga Waxbarashada Maanta waxaan halkan idiin kugu so gudbin doona haduu alle yiraah Taarikhda Ninka lagu magacaabo Nick Vicic oo ah nin Lixaadkiisa uusan dhameystirneen kaasi oo lahen lugo iyo Gacmo islamarkana noqday nin aduunka dhan laga yaqaano oo dadka dhiira galiya.
Taarikhda Ninkaan waxa ino so Gudbinayo Walalkeena Lagu magacaabo:
Abdi Aziz Nadara
Channelka uu youtbeka ku leeyahay waxa la dhaha:
Booqo Hadii aad Rabto Taarikho kale Channelkiisa la yiraah Abdi Aziz Nadara
Maxey tahay Cashirka aan Video ka Baraneeno:
In hadii la dadaalo aad gaareyso meel sare isla markaana aadan dhag u dhigin dadka ku niyad jabinayo kuwaasi oo ku leh wax ma qabsan kartit lixaadkaada kala dhiman iyo warar kale .
Sidoo kale waxaan ka baraneena in qofka sida uu doono ha ahaado uu wax baran karo islamarkana uu Ka gun gaari karo Mustaqbalkiisa .
NB Waxaan Video waxa u adeegsaneena waxa ay tahay Waxbarasho oo kaliya Xuquuqda Video waxa leh Eng Abdi Aziz Nadara.
Daabicida waa Ifiyaha cilmiga Tichnollgy Center
So jeediye Abdi Aziz Nadara Email: alaqsaa1996@gmail.com
Fursad Muhiim ah : Halkan Ka Dagso Kitaabka Qur'aanka Kariimka oo Lagu Tarjumay AfSomali Xuquuqda Kitaabka waxa leh www.waajibad.wordpress.com
9:45:00 AM Cashiro-Diini, Qormooyin No comments
Asc aqiyarey Meel walba oo aad joogtan waxaan idiin leeyahay Jimco Wanaagsan manta Waxaan idin la wadaagaya Kitaabka Qur'aanka kariimka kaasi oo ku Tarjuman Afkeena Hooyo Ee Soomaliga ah .
Xuquuqda Kitaabkan Waxa iska leh Websitka oo ah Midka aan kaso dajiyay :
Waan huba in aad wax badan ka faa'iidi doonto hadii Eebe Yiraah waxa uuna ku qoran yahay Arabic iyo Somali .
Halkaan Hoose ka Dagso Kitaabka Qur'anka Kariimka oo ku Turjuman Afsomali
Halkan ku Dhufo si uu Kitaabka kugu so dago
Waxa idiin so Gudbiyay : C/risaaq Maxmed Rashiid
Emailkeega waa: Alaqsaa1996@gmail.com
Daawo Tips Cusub: kaasi oo ino so jeedinayo Maclin Saciid xaga Afrax Xisaab Cajiib ah Natiijada kuusoo baxaysa ayaaba la sii ogyahay Hadaba sidee ku dhici karta.
4:57:00 AM Dhaqanka, NOLOSHA No comments
Asc Aqiyaarey Meel walba oo aad joogtan waxaan idiin leeyahay Maalin Wanaagsan Maanta haduu eebe Idmo waxan jeclahay in aan idiin la wadaago Video Marna aan dhihi karaba waa Cashir kaasi oo ino so jeedinayo Maclin Saciid Xaga Afrax.
Fiira Gaar ah :
Xuquuqda Video waxa iska leh Saciid Xaga Afrax hadaan Nahay Bahda Ifiyahacilmiga waxan u isticmaalena Waxbarasho iyo Madadaalo oo kaliya.
Cinwaanka Video waa :
Xisaab Cajiib ah Natiijada kuusoo baxaysa ayaaba la sii ogyahay ( Siciid Xagaa Afrax)
Waxa idiin so Gudbiyay C/risaaq Maxamed Rashiid Axmed
Wixii Fariin iigu so dir Alaqsaa1996@gmail.com
8:02:00 AM DIINI, NOLOSHA No comments
Asc Kulanti Wanaagsan Aqiyaarey Meel walba oo aad joogtan manta waxaan halkaan idiin kugu so gudbinaya Websit Somali ah kaasi oo aad ka heli kartit kutubo iyo Qormooyin ka hadlaya ama diirada Saaraya Diintena Suuban ee Islaamka .
Hadaba Magaciis Websit-kaan?
Magaca Websit-ka waxa La dhaha https://wajibad.wordpress.com/
Maxey Tahay sababta aad Noola Wadaageso Macluumadka Websit-kaan Ma adiga Leh?
Sababta aan idiin la wadaagayo aya ah in aan jeclahay Wanaagiina iyo in aad wax badan ka Faaiidan Shabkada Ifiyahacilmiga Hadii ay ahaan Lahed Tichnlogy-ada ama hadii ay ahan lahed Culuumta Diinta .
Websitkaan Aniga daalacdo Waxana ka helay Qaabka Hufan ee Diinta islaamka u baraayo Dadka Soomaliyeed ee ku adag tahay Carabiga Marka Sidaa Owgeed ma lihi Xita ma aqaan qofka leh.
Websitkaan runtii Waxyaabaha laga heli karo waxa kamid ah hadii aan idiin so Koobo:
Tafsiirka Qur'aanka Kariimka.
Axadiista Nabigeena Muxamed (NNKH) Laga so Wariyay.
Siirda Nabigeena Muxamed (NNKH).
Tariikh Nololeed-ka Asxaabta Nabiga (NNKH).
Kutub iskugu jirta Fiqi Axaadis iyo Muwaadic Kale oo inta ka badan.
Hadaba Si aad u Booqato Websitkaa Isla markaana ishaada Ugu Aragto Waxa ka jira Xogta aan ku siiyay Ku Dhufo Linkiga Hoose:
Ku Dhufo Halkan si aad u Booqato https://wajibad.wordpress.com/
Waxa Idiin So Diyaariyay: C/risaaq Maxamed Rashiid Axmed
Wixii Fariin iigu so dir: Alaqsaa1996@gmail.com
Halkan Ka daawo Dhamaan Cashirada Photoshop-ka ee Diyaarka ku ah Ifiyahacilmiga Waxa idin diyaariyay C/risaaq Maxamed Rashiid Axmed
6:12:00 AM Cashiro-Computer, Ciladbixin-computer, Computerka, Photoshop No comments
Asc aqiyaarey meel walba oo aad joogtan waxaan idin leeyahay Maalin wanaagsan manta waxan idiin so gudbinaya Dhamaan Cashirada Photoshopka ee Diyaarka ah.
Cashiradan waa kuwa ka bilaabanayo Bilow ayadoo la geynayo meel dhexdhexad ah Waxa ayna ka kooban yihiin ilaaa 7 Cashir Waxaana ku dhigi doona Vertion-kii ugu danbeyay ee ah Cs6.
Si aad u Daawato Dhamaan Cashiradaas ama u Dagsato ku dhufo Halkaan hoose.
Halkan ka Daawo Dhaman Cashirada Photoshopka ee Diyaarka ah
Hadii aad dooneso inaad Aragto ama Daawato Cashirada kale aan Kugu diyaariyay Channelkeega Youtube-ka halka hoose ku dhufo.
Halkan ka Daawo Cashirada aan duubay ee ku jiro Youtubekeena
Waxa cashiradan idiin diyaariyay: C/risaaq Maxamed Rashiid Axmed
Wixii Suaal iigu so dir: Alaqsaa1996@gmail.com
Side lo joojiya Applications-ka uu Mobile-kaada uso Dajinayo sida Automatic-ah iyo sida looga joojiyo Whatssupp Waxyaabaha uu kaligii so dajinayo adoon u dirin -->>Qoraal+Sawiro Qore C/risaaq Maxamed Rashiid
3:30:00 AM Cashiro-Computer, Ciladbixin-computer, Computerka, Qormooyin, Tichnlogy-yada No comments
Asc kulanti wanaagsan Aqiyaarey Maanta waxan halkan idiin kugu so bandhigaya dhoor qaab oo aad ku dhaqaalesan karto Datada Internetkada ama aad uga hor tagi karto iney Lacagta internetka ay Ciyoow ka dhamaato.
Hadaba aan isla fahano marka hore maxa keeni kara in Lacagta Internetka ay ku dhamaato:
1-In aad ku Daawato Videos Ama uu si Automatic ah uso Dagan Videos ama Applcations-ka
Tusaale Whatsupp waxa uu so dajin kara si Automatic ah Videos laguu so diro Taasi oo keeni karta Lacagta Internetka oo Yaraata.
2-In aad So Dagsato Apps ama uu Mobilekada Si Automatic ah uso dajiyo Applicationo ama uu Si Automatic ah Mobile-kada uu Update iskugu diro.
iyo Siyaabo kale oo inta lagu so koobi Karin balse inta aya kaaga filan xogtas.
Hadaba side uga hor tagi karaa:
1-Inaad yareeso ISticmaalka Videoska aad Daawaneso Hadii aad ku daawan lahed Facebook ama Youtube Tani waa mid aad Aqiyaar u leedahay oo ogaanshahada aad ku sameyn karto.
2-Inaad iska xirto Apps-ka ama Applicationada sida Automatica Wax uso dajinayo sida Whatsupp iyo Google PlayStore iyo kuwa lamidka ah.
Sidee looga Xira Whatsupp inu wax si Automatic uso dajiyo Raac Stepskan:
Step1 : so Fur Whatsupp-kada kadib eeg qeybta kore midig jirta waxaad Arkeysa Sadax Dhibcood oo taagan ku dhufo Kadib waxaad kasii doorata Settings.
Step2: Waxa kuso baxayo Qeyb kale waxaad kasii doorata Meesha ay ku qoran tahay Data Usage.
Step3: Markaad Data usage ku dhufato waxa kuso baxayo Daaqad kale eeg meel ay ku qoran tahay When Using Mobile Data ku dhufo kadib waxaad Check ama Calamada ka qaadata ayaga oo dhan .
Sidoo kale waxa ku dhufata meel ay ku qoran tahay when Roaming ayadana calamadaha dhan ka qaad.
Hadii aad istcmaaleso Wifa oo lacagta cunaayana waxaad doorane When Connected Wi-Fi kadib Ticta aya ka qaade oo waa baneene
Fadlan Raac Sawirada:
Sidee Playstore looga joojiya Automatic Download:
Si aad uga joojisid Automatic Download Ama Applicatinada uu Kaligiisa so Dajinayo Ama u Update gareynayo Mar Steps hoos ku Xusan:
Step 1-:Fur Applicationka La yiraah PlayStore
Step 2: Kadib Ku dhufo Calaamada Sadaxda ah ee is kor saran Taasi oo ku Taal Qeybta kore ee Playstore sida Sawirka Hoose aad ka aragto Meesha aan calaameyay ku dhufo.
Step 3: Markaad ku dhufato mesha aan ku calaameyay waxa arke Sawirkaan Hoose.
Step 4: Ku dhufo Meesha ay ku qoran tahay Settings Markaas kadib waxa arkee Sawirkaan hoose oo kale.
Step 5: Markaad Aragto Sawirka kore oo kale Kadib ku dhufo meesha ay ku qoran tahay Auto-Update Apps ee Calaamadeesan ku dhufo waxa arkee marka kadib Sawirkan hoose.
Step 6: Ugu danbeyntii ku dhufo Meesha Ay ku qoran tahay Do Not Auto-Update Apps ee Sawirka kore kaaga muuqato.
Waxa qore Eng C/risaaq Maxamed Rashiid
Wixii Suaa; iigu so Dir: Alaqsaa1996@gmail.com
Cashir Faaiido leh :Side Internet lo Wadaaga ayadoo la isticmaalayo Mobile Bluetooth Halkii aad ka isticmaali laheed Hotspot
1:01:00 AM Cashiro-Computer, Ciladbixin-computer, Tichnlogy-yada No comments
Asc kulanti wanaagsan dhamaantiina Asxaabta aan jeclahay meel walba oo aad joogtan manta Waxaan idin la wadaagaya Cashir aad u muhiim u ah kaaso aan hubo in aad wax badan ka faa'iidi doontit.
Waxaan isticmaala Mopil Sumung A5 ah marka Waxaan ka wayay Network Mode-ka LTE 4-G si kasta oo aan u raadiyo waan keni wayay sidoo kale dhibaatada jirta waxa ay tahay waxan isticmaala shirkada bixisa Adeega Internetka ee Somnet ee SIM CARD-ka marka Inteenkeeda ama Signalkeeda waxa uu igu yahay Daciif oo iima so qabanayo si fiican sidaas awgeed qadka aan isticmaalayo waxa uu yahay Daciif.
Hadaba LTE mopilka leh muxuu uga diwan yahay mopilka kale
Waxa jira mobile lo isticmaali karo ama lagu adeegsan karo 4-G waana kuwa leh network mode-kooda LTE hadaba si aad u xaqiijiso in mopilkaada uu leeyahay LTE waxaad ku eegi karta sida tan.
1- ku dhufo Settings
2-ku sii dhufo More Networks.
3-ku sii dhufo Mobile Networks.
4-kadib si taabo Network Mode meel ay ku qoran tahay waxa arkee labo midood.
in uu mobile kaada aqbalayo LTE 4 G iyo in uusan Aqbaleen
Hadii uu aqbalayo LTE 4G waxa arke Sawir nuucan ah.
Hadii uusan aqbaleen LTE waxa arke Sawir Nuucan ah.
Marka dulucda aan inta idiinku sharxayay waxa ay aheed in hadii uu mobilekada yahay ama leeyahay LTE uu aqbalayo 4G islamarkana uu leeyahay Speed badan.
hadab aan cashirirka ku laabte marka mobile-keega ma aqbalayo LTE 4G islamarkana Signalkiisa Daciif waaye marka waxa xaafada ii yaal mobile kale oo leh LTE Qadkiisana waa Speed marka waxan is dhahay kawaran hadii aad isku xirto labada mobile oo aad isticmaasho qadka mobileka kale.
waxaan iskugu xiray Labada Mobile waxa lo yaqaan Hotspot lkn cilad ayuu igu keenay waxa ay aheed ciladaa in uu iska istaagayo daqiiqado kadib xitaa hadii aad Siiso daqiiqado badan waxaan goostay in aan iskugu xiro anoo isticmaalayo Bluethooth.
Hadaba si aan iskugu xirno Labo Mobile anagoo isticmaaleno Bluethooth waa sida tan la soco Cashirka.
Mobile koowaad waxa ku saxee sida tan:
1. waxaa ku dhufata “Settings” .
2. ku dhufo “General,” kadibna kusii dhufo "Network. ogoow mobile-da qaar markaad ku dhufato Setting waa arkee Network"
3. Kidib taabo “Tethering and Mobile Hotspot” .
4. Kadib ku dhufo “Turn on Bluetooth” kadib si riix Buttonka si aad uga dhigto enable Internet sharing via Bluetooth.
Mobile 2-aad waxa ku saxee sida tan:
2. ku dhufo “General,” kadibna kusii dhufo "Bluetooth. ogoow mobile-da qaar markaad ku dhufato Setting waa arkee Bluetooth kadib ku dhufo"
3. Kadib waxaad arke Mopile aad ku xiri rabto waxa ku dhufane calaamada wareegsan ee Setting-ka ah kadib waxaad dhahda Enable .
Waa dhamaatay Bashaal sxb marka.
Wixii suaal iigu so dir
Daawo Dhamaan Cashirada Visual basic(Vb.net) Waxa idiin so Diyaariyay Eng C/risaq maxamed Rashiid Ka faaiidesi wacan (Fadlan asxaabtada uga Faaiidey oo la wadaag)
9:00:00 AM VisualBasic(VB.net) No comments
Asc aqiyaarey meel walba oo aad joogtan waxaan idin leeyahay Maalin wanaagsan manta waxan idiin so gudbinaya Dhamaan Cashirada Visual basic ee Diyaarka ah anagoo kaso biloownay Bilow Waxa uuna Cashirada ay marayan Advanced ama meel sare Yacnii qeybta Database-ka .
Waxa xusid mudan in aan ku dhiseeno Projecti la yiraah Small Shopping System oo ka bilaamaya Cashirka 10aad si aan si wanaagsan ugu fahano VB.
Aqriste hadii aad Rabto dhamaan Cashirada ku Dhufo halkaan si uu ku geeyo Playerlist-ga Channelka Youtubeka aan ku leeyahay .
Sidoo kale waxaad ku dhufan kartaa halkaan si aad Cashiradaan oo u daawato.
Faa'iidooyinka Cunitaanka Midhaha Cinabka Xogaha dahsoon)
6:51:00 AM NOLOSHA No comments
Kulanti wanaagsan kuso dhawwada Gacmo Furan Ramadanu Mubaarag maanta waxaan halkaan idiin kula wadaagaya Video ku saabsan Faaiidada Ay leedhay cunida Mariha Cinabka.
Waxana inoo so jeedinaya Xusen kurdi dhanka kale xuquuda Video waxa leh Xusen Kurdi waxan u adeegsanena in aynu Aqoon ahan uga Faa'iidno.
Wixii suaal iigu so dir:alaqsaa1996@gmail.com
Maxay farta dhakhaatiirtu u Tahay mid Qoraakeeda aan La Fahmayn (Xogta Dahsoon)
6:32:00 AM NOLOSHA No comments
Aqiyaarey waad mahadsan tihiin Ramaadnu Mubaarag Maanta waxaaan halkaan idiin kula wadaagaya Muuqal aad u xiisa badan kaasi oo inoo so jeedinaya Xuseen Kurdi oo ah nin ku wanaagsan Diyaarinta Documentry Filims-ka.
Waxa uu Video ku saabsan yahay Sababta ka danbeysa in Dhaaqtirta Fartooda aan la fahmin.
Xuquuqda Video waxa leh Xuseen Kurdi kaliga Macluumad ahaan ayan u adeegsanena
Wxii Information ama Macluumad iigu so dir Email:Alaqsaa1996@gmail.com
Daawo Xujo aad u cajiib ah: kawaran hadii suaal lagu weydiiyo inta aadan shegina horay lo sii ogyahay By Saciid Xagaa Afarah
11:15:00 AM NOLOSHA No comments
Aqiyaarey kuso dhawaada Hooyga Barashada Computerka Ramadanu kariim caawa waxan idin la wadaagaya Video aad u Faa'iido badan kaasi oo ku saabsan Xujo .
We Use This Video For Education.
Hadaba Xuquuqda Video waxa leh :Saciid Xagaa Afarah
Baro Sadax Qaab oo aad Mopile-kada Sumsung-ka Rest...
Sidee lo Save gareysta Qoraalada,Sawirada ku jira...
Halkaan ka Daawo Dhamaan Cashirada Html And Css W...
Daawo Dhamaan Cashirada Ms Sql Server Waxa idiin s...
Sheko murti ah:Boqor aya maqlay nin Shaqaalihiisa ...
Halkaan ka daawo : Taariikh noleeydka Nick Vujicic...